काठमाडौं, ३० कात्तिक- हठ-योग प्रचुर सम्भावनाले भरिएको हुन्छ । यदि यसलाई सही तरिकाले प्रसारित गरिने वा सिकाइने हो अनि सोहीअनुसार अभ्यास गरिने हो भने, यो विशाल सम्भावना बन्दछ । यतिखेर, हठ-योगलाई जताततै एक प्रकारको व्यायाम भनेर बुझिएको छ । यो धारणालाई परिवर्तन गर्नु निकै कठिन कार्य हो । हठ-योग भनेको तौल घटाउने, ढाड ठीक गर्ने वा स्वस्थ हुने बारेमा होइन । ती परिणामहरू मात्र हुन्, उद्देश्य होइनन् ।
तपाईंले यो एउटा विचारलाई आफ्नो दिमागबाट हटाउनै पर्छ— “मलाई के हुन्छ ?” त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस् । तपाईंलाई के हुन्छ ? तपाईं एकदिन मर्नुहुनेछ ! यो नै जीवनको अन्तिम रहस्य हो । यदि तपाईंले आफूबारे रहेको यो चिन्ता त्याग्नुभयो भने, तपाईंको जीवनमा तपाईंको शरीर एउटा सोपान (भऱ्याङ) बन्नेछ । दुर्भाग्यवश, मानिसहरूले यो शारीरिक प्रणालीलाई सम्भावना बनाउनुको सट्टा अवरोध बनाइरहेका हुन्छन्, किनकि उनीहरूले आफ्नो शरीरसँग पहिचान गाँसेका छन् । यदि तपाईंले यो एउटा विचार हटाउने हो भने, तपाईं स्वयं असीम सम्भावना बन्नुहुनेछ । -सदगुरुको प्रवचनमा आधारित